ကြီးမားသော Capacity ရေစိုခံ အဝတ်လျှော်ခြင်းတောင်း | ဝယ်ပါ။ WoopShop®
မေ ၂၆ မှာ တောင်းတစ်တောင်း မှာထားတယ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့မှာ ရောက်တယ်။ တော်တော်မြန်တယ်။ ခြင်းတောင်းက အနံ့အသက်ဆိုးပေမယ့် မြန်မြန်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပုံသည် ဓာတ်ပုံတွင်ကဲ့သို့ ပြတ်သားခြင်းမရှိသော်လည်း ၎င်းသည် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို မည်သို့မျှ မထိခိုက်စေပါ။ ခြင်းတောင်းအတွင်းတွင် ပလပ်စတစ်အကာအရံများပါရှိသောကြောင့် ၎င်းကို သံဖြင့် မီးပူတိုက်ပါက ပိုမိုသတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ နံရံတွေကို ရေနွေးငွေ့နဲ့ ဖြောင့်လိုက်တယ်။ အဝတ်လျှော်ဖို့ ခြင်းတောင်းအဖြစ် အခန်းထဲမှာ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် ဝယ်ခဲ့တယ်။
Замовляла цей кошик у невелику ванну. І сам він підійшов, оскільки розміри його справді невеликі. Сам товар прийшов за рівно два тижні від моменту замовлення через Meest доставку. Дуже зручно။ Дякую за товар!
အဝတ်လျှော်ခြင်းတောင်းကြောင့် ကျွန်တော်ထင်ထားတာထက် နည်းနည်းပိုကြီးပြီး မျှော်လင့်ထားတာထက် အနည်းငယ် အရေးအကြောင်းတွေ ပိုမြန်လာလို့ စိတ်ပျက်မိပေမယ့် ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပုံဖော်ဖို့ သူတို့ကို အချိန်ပေးပြီး ပုံမှန်ပါပဲ၊